STSI, Nkuzi, ikike | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: GIBDD, Ọzụzụ, Ikike
Ogologo oge ole ka ụlọ akwụkwọ ịkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ? foto int
Ogologo oge ole ka ụlọ akwụkwọ ịkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ? foto vn na ndụ http://www.avtoshkolakam.ru/poleznaya-informatsiya/31-skolko-dejstvuet-svidetelstvo-ob-okonchanii-avtoshkoly http://www.zmost.ru/notes/experts/379-svidetelstvo-ob -okonchanii-avtoshkoly-srok-dejstviya Theoretically a certificate of completion for a driving school is the same government document as any other one about graduating from a educational institution, ma ...
Ị nwere ike ịchọta onye ọka iwu maka ịkwọ ụgbọala?
Ịchọrọ onye ọka iwu maka ikike ịkwọ ụgbọala? Akwụsịla onye ọka iwu maka ịkwọ ụgbọala. Site na November 24, onye ọkwọ ụgbọala aghaghị ịnwe akwụkwọ ikike iji ...
ikike moto moto
ikike maka ọgba tum tum ikike maka ụgbọ ala na traktọ Nke a bụ ajụjụ ma ọ bụ aro?))) A chọrọ nnwere onwe na mpaghara A ma ọ bụrụ na ụda nke igwe ịnyịnya karịrị 50 cubes. Ọ bụ ezie na ndị Japan scooters ruo 100 cubes ...
kedu etu esi enweta ikike ịkụziri ụgbọ ala?
kedu etu esi enweta ikike ịkụziri ụgbọ ala? Ọ bụrụ na ị nwere afọ atọ nke ahụmahụ ụgbọ ala na ụgbọ ala na ihe ọ bụla gearbox, ọ bụrụ na ị na-eche na a na-achọsi ike na-enweghị atụ maka ...
Kedu ụgwọ ọ ga-akwụ maka ịkwọ ụgbọala otu ụzọ gaa nzukọ?
Kedu ụgwọ ọ ga-akwụ maka ịkwọ ụgbọala otu ụzọ gaa nzukọ? Ọ bụrụ na ị jisie ike gosi na enweghị brik, mgbe ahụ, ọ ga-agba ọsọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ maka oge mbụ 4 otu ọnwa iji na-eje ije, gbakwunyerekwuo ...
Ego ole bụ akwụkwọ nke ọzụzụ na ụlọ akwụkwọ na-akwọ ụgbọala, ya bụ, n'oge ole ka ị ga-eji aka nri?
Ego ole bụ akwụkwọ nke ọzụzụ na ụlọ akwụkwọ na-akwọ ụgbọala, ya bụ, n'oge ole ka ị ga-eji aka nri? Akwụkwọ nke nkwụsị nke ụlọ akwụkwọ na-akwọ ụgbọala enweghị ụkpụrụ nke njedebe. Ọ dị ka diplọma na ụlọ akwụkwọ ahụ. Dị ka ọ bụla ...
Ego ole ka ọ na-eri iji zụta ụdị B?
Ego ole ka ọ na-eri iji zụta ụdị B? Ana m akwado ihe niile dị n'elu. ịmụta. ma buru ya onwe gi. Ejiri ọbara SDA dee. ịmara nke iwu ga-azọpụta ndụ gị. ha ga-enwekwa mpako na ha onwe ha agafewo, kwere na obi ụtọ.
Kedu ka esi agbanwe ikike Soviet ochie gaa ọhụrụ? Achọrọ m nyochaa ọzọ? E nyere ikike na 1975
Kedu ka esi agbanwe ikike Soviet ochie gaa ọhụrụ? Achọrọ m nyochaa ọzọ? E nyere ikike na 1975 afọ. Ọmụmụ agaghị abịa, nyocha ga-abịakwa, ma nke a bụ ihe efu, otu izu na akwụkwọ na ...
Etu esi eme “onye nzuzu” na igwe ugbo ala n’iru snow
Etu ị ga - esi “na - agbagharị” na igwe kwụ otu ebe dị na snow Akpịrịkpa tozuru ga - adị na wiilị ndị na - anya ya, ma ọ bụghị na ha agaghị abanye ma ọ bụ sọsọ ụgbọ ala ahụ ga - aga dịka sled, otu, nnyefe kwesịrị ...
Gibdd, ọrụ ọha na eze
Ndị uwe ojii, ndị ọrụ okporo ụzọ ihe ha ga-eme, otu nsogbu ahụ ... enwere ike ọ bụrụ na mmadụ bụ onye ọzọ? na akwụkwọ kwesịrị ịbụ akara sitere na mmanụ a .ụ. etiti ebe enyocha gị. ekwesịrị ịdị na ...
kedu ụgwọ a ga-akwụ maka ịkwọ ụgbọala n'enweghị ụdị B, ma e nwere otu C
kedu ụgwọ a ga-akwụ maka ịkwọ ụgbọ ala na-enweghị ụdị B, ma e nwere otu C dị mkpirikpi: site na 5 ruo 15 puku rubles + parking! Nkebi 12.7 nke 1 nke Usoro Nlekọta nke Russian Federation: https: //temuri.ru/ezda-bez-kategorii / ...
otu esi eme mmezi "overpass" na sekit?
otu esi eme ihe mmezi “overpass” na sekit? M na-adụ gị ọdụ ka ị bido n’ule ahụ ebe ọ bụ na onye nkuzi kuziiri m .. Ọ bụ ezie na ya onwe ya na-eme ya n'ụzọ dị iche .. Kpa ya bụ maka ule ahụ ọ…
Iweghachite ikike ikike ụgbọ ala zuru ohi!
Iweghachite ikike ikike ụgbọ ala ezuru ohi! Iji weghachi ihe furu efu. Ezuru ohi ma ọ bụ mebie Ị na-ede akwụkwọ na ndebanye aha TS na ị ga-adreesị na mpaghara ebe ị ga-ede akwụkwọ na nnyefe nke ọhụrụ ...
Kedu ụdị ndị dọkịta ị chọrọ iji nweta mmanụ aṅụ? asambodo maka ikikere onye ọkwọ ụgbọala?
Ihe ndi dibia choro ime iji nweta mmanu. asambodo akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala? Anyị nwere ọrụ na ndị uwe ojii okporo ụzọ .. enwere neuropathologist .. dọkịta na-ahụ maka anya ... na nke ahụ niile ... nkeji 15 .. asambodo dị n'aka bụ akwụkwọ sitere n'aka onye isi ala…
N'ọnụ ụzọ nke ụzọ ụkwụ, a na-emegharị ụgbọala mgbe niile, ọ dị ebe ọ bụla ị na-eme mkpesa na ebee ka m nwere ike ịga?
N'ọnụ ụzọ nke ụzọ ụkwụ, a na-emegharị ụgbọala mgbe niile, ọ dị ebe ọ bụla ị na-eme mkpesa na ebee ka m nwere ike ịga? Gbalịa ilebara anya, nwere ike ịkọwa ihe ịrịba ama ma ọ bụ post, ọ bụrụ na ị kwadoro n'ụzọ doro anya, na ụda si na ...
Kedu ihe dị iche n'etiti otu traktọ “D” na A3? Kedu ihe njirisi K-700 bụ D na Belaz bụ A3?
Kedu ihe dị iche n'etiti otu traktọ “D” na A3? Kedu ihe njirisi K-700 bụ D na Belaz bụ A3? O doro anya na D na-enye gị ohere ịkpọ n'okporo ụzọ. Gaa na mkparịta ụka pụrụ iche na ...
Kedu oge ole ka a ga-eme ka iwu nke State Safety Inspectorate kwụsịrị maka ịkwụ ụgwọ?
Kedu oge ole ka a ga-eme ka iwu nke State Safety Inspectorate kwụsịrị maka ịkwụ ụgwọ? site na afọ 1 ma ọ bụrụ na ndị ọrụ nke ghibd achọghị ịdebe gị, ma ọ bụrụ na e mere mgbalị dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ndị uwe ojii ...
Ego ole ka ọ na-eri ịzụta udomo oro "obodo" na ndị uwe ojii okporo ụzọ?
Ego ole ka ọ na-eri ịzụta udomo oro "obodo" na ndị uwe ojii okporo ụzọ? Bido n'isi. Afọ 2 gara aga 15 puku rubles kwụrụ ụgwọ maka inyefe nsogbu na-enweghị nsogbu. Ebe ọ bụ na ọnụ ahịa mgbanwe dollar agbanwebeghị nke ukwuu, yabụ na ọnụahịa ...
ihe akwụkwọ ndị ịchọrọ inwe mgbe ị rutere n'ụlọ akwụkwọ ịkwọ ụgbọala. olee ndị nke a?
ihe akwụkwọ ndị ịchọrọ inwe mgbe ị rutere n'ụlọ akwụkwọ ịkwọ ụgbọala. olee ndị nke a? N'ụlọ akwụkwọ na-akwọ ụgbọala? Ọ dịghị. . Na paspọtụ ị ga-abịa, n'ebe ahụ ka mmadụ niile ga-ekwu .. Ego na paspọtụ Passport, mmanụ aṅụ na akwụkwọ na njirimara site na nne nne, ...
Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị gafere ule na ndị uwe ojii okporo ụzọ, mgbe ị natara ikike? Russia, Moscow
Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị gafere ule na ndị uwe ojii okporo ụzọ, mgbe ị natara ikike? Russia, Moscow ị na-aga ebe ị na-akwụ ụgwọ taa, ị na-abịa na onye ọ bụla na windo na ị na-ekwu okwu, enyere ọtụtụ na na na, mgbe ahụ ...